Itoobiya oo diiday dhexdhexaadin siina wada baacsiga Tigreeda -
The SpaceX unmanned rocket makes a soft landing before exploding on…
Ivory Coast enters the last day of the campaign like all…
Home News Itoobiya oo diiday dhexdhexaadin siina wada baacsiga Tigreeda
Itoobiya oo diiday dhexdhexaadin siina wada baacsiga Tigreeda
Dowladda Itoobiya ayaa diiday isku day Afrikaan ah oo ay ku dooneysay inay ku dhexdhexaadiso Sabtidii, iyadoo sheegtay in ciidamadeedu ay qabsadeen magaalo kale oo ay uga sii horjeedaan caasimadda mucaaradka ee waqooyiga gobolka Tigray.
In ka badan laba toddobaad markii uu socday duullaanka ra’iisul wasaare Abiy Ahmed, dowladdu waxay sheegtay in xoogagga Tigreegu ay cagajugleyn ku hayaan waddooyinka isla markaana ay duminayaan buundooyinka si ay u hor istagaan wararka ku socda caasimadda gobolka, Mekelle, oo ay ku nool yihiin qiyaastii nus milyan qof.
Tigreegu waxay u balan qaadeen cadaab cadawgooda soo socda. Waxay beeniyeen inay burburiyeen buundooyinka laakiin looma helin inay faallo ka bixiyaan waddooyinka falaya.
Boqolaal, laga yaabee kumanaan, ayaa dhimatay in kabadan 30,000 oo qaxooti ahna waxay u qaxeen Suudaan tan iyo dagaalkii 4tii Nofeembar. Dagaalku wuxuu ku faafay meelo ka baxsan Tigreega, oo ciidamadeedu ay gantaallo ku garaaceen gobolka Axmaarada u dhow iyo qaranka Eriteriya, taas oo walaac ka muujisay oo ah dagaal balaaran iyo kala qaybsanaanta itoobiyada badan.
Xukuumada Abiy ayaa sheegtay inay dhawaan gaari doonto magaalada Mekelle kadib markii ay qaadatay magaalooyin kala duwan oo ku xeeran. Sabtidii, waxay sheegtay in Adigrat, oo qiyaastii 116 km waqooyiga ka xigta Mekelle, ay sidoo kale dhacday.
Jabhadda Tigray People’s Liberation Front (TPLF) ayaa kacdoon ka muujisay in sagaal qof oo rayid ah ay ku dhinteen dhimashooyinkii ugu weynaa ee ka dhaca madaafiicda Adigrat.
Dowladda si dhaqso leh looma helin si ay uga jawaabto, laakiin waxay dhowr jeer oo hore diiday inay bartilmaameedsato dadka shacabka ah.
Eedeymaha dhinacyada oo dhan way adagtahay in la xaqiijiyo maxaa yeelay taleefanada iyo qadka internetka ayaa hawada ka maqnaa tan iyo bilowgii dagaalada iyadoo saxaafada inteeda badan laga saaray.
Eritrea waxay beenisay eedaymaha kooxda TPLF ee ah inay ciidan u dirtay xadka si ay u taageeraan gulufka Abiy ee ka dhanka ah xoogaga Tigreega, oo waliba cadaw soo jireen ah u ahaa Eritrea.
Jimcihii, Midowga Afrika wuxuu magacaabay madaxweynihii hore Joaquim Chissano ee Mozambique, Ellen Johnson Sirleaf oo Liberia ah iyo Kgalema Motlanthe oo Koonfur Afrika ah ergo gaar ah oo raadinaya xabad joojin iyo wadahadal dhex dhexaadin ah.
Abiy, oo sanadkii hore ku guuleystay Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ee heshiis nabadeed oo lala galay Ereteriya, ayaa ujeedkiisu yahay inuu soo qabto hoggaamiyeyaasha TPLF ka hor inta uusan hadlin.
“Warka faafiyey ee ah in ergooyinku u safri doonaan dalka Itoobiya si ay u kala dhexgalaan dowladda federaalka iyo xubnaha dambiilayaasha ah ee TPLF waa been,” ayay dowladdu ku soo qortay barteeda Twitter-ka maalintii Sabtida.
Abiy wuxuu ku eedeeyay hogaamiyaasha Tigreega inay ku kaceen kacdoon ka dhan ah dowlada dhexe isla markaana ay weerareen ciidamada federaalka ee ku sugan magaalada Dansha. Jabhadan ayaa sheegtay in xukuumada Abiy ay takooreyso kuna dhibaateyneyso muhaajiriinta tan iyo markii ay xafiiska la wareegtay labo sano ka hor.
Abiy wuu inkiray arrintaas, wuxuuna sheegay inuu kaliya isku dayayo inuu soo celiyo sharciga iyo kala dambeynta isla markaana ilaaliyo midnimada Itoobiya iyo dadkeeda 115 milyan ah.
Sabtidii, dowladdu waxay sii deysay fiidiyow qol ay kujiraan askarta Tigreega oo kulan ka leh khilaafka. Askartu waxay dhagaystaan ​​codbaahiyaha iyagoo kolba mid ula hadlaya kamaradda.
Billene Seyoum oo ah afhayeenka xafiiska raysal wasaaraha ayaa sheegtay in dhamaan askartu ay ahaayeen ciidamo firfircoon oo u dhashay qoomiyada Tigreega isla markaana kulankan uu qayb ka yahay olole lagu xaqiijinayo in militariga uusan ku xirnayn xisbi siyaasadeed ama qoomiyad.
Fiidiyowga, askari wuxuu ku sheegayaa in millatarigu uu lamid noqday qof qoyska ka tirsan oo ka tirsan qoomiyadda Tigreega. Dhowr ayaa cambaareeyay weerarada lagu qaado militariga; waxay oraneysaa “in ciidanka loo qaybiyo qowmiyado hab noocaas ah gebi ahaanba lama aqbali karo”.
Ciidamada Tigreega ayaan isla markiiba la helin si ay uga hadlaan fiidiyowga.
Shaqaalaha gargaarka ayaa sheegaya in iskahorimaadka uu abuurayo dhibaato bini’aadanimo oo kajirta Tigray, halkaas oo inbadan oo kamid ah in kabadan 5 milyan oo qof ay horey u barakaceen oo ay ku tiirsanaayeen gargaarka cuntada xitaa kahor iskahorimaadka.
Sawirro dayax gacmeed laga qaaday shirkadda hawada sare ee Maxar Technologies ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa muujisay dhismayaal burbursanaa oo ku teedsan wadada weyn ee u dhow garoonka diyaaradaha Dansha, halkaas oo dowladdu ay sheegtay inuu ka dhacay weerar lama filaan ah 4tii Nofeembar oo lagu qaaday ciidamada federaalka.
Kooxda TPLF ayaa caan ku ah gobolka ay ka taliyaan waxayna xukumaan siyaasada qaran laga soo bilaabo 1991 ilaa Abiy uu xafiiska qabtay. Abiy waalidkiis waxay ka soo jeedaan qowmiyadaha waaweyn ee Oromada iyo Amxaarada.
“Waxaan sameyn doonnaa wax walba oo lagama maarmaan u ah si loo xaqiijiyo xasilloonida gobolka Tigray iyo in muwaadiniinteenna ay ka madax bannaan yihiin waxyeello iyo baahi,” ayuu ra’iisal wasaaraha ku soo qoray Twitter-ka Sabtidii.
Guud ahaan xadka Suudaan, UN waxay qorsheyneysaa suurtagalnimada imaanshaha 200,000 oo qaxooti ah.
“Xaaladda waa mid aad u daran,” ayuu yiri Jens Hesemann, iskuduwaha adeegga badbaadinta ee Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga (UNHCR), kana yimid halka laga gudbo ee Hamdayet wuxuuna codsanayaa gargaar deg-deg ah oo deeq-bixiyeyaasha ah.
Previous articleXoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Pompeo ayaa la kulmay dowladda Afghanistan
Next articleDadadka Roobka Mogadishu
Dalladaha Waxbarashada iyo Jaamacadaha oo la faray inay u hoggaansamaan amarada dowlada
Dowlada Federalka oo shaacisay in Ra’iisul Wasaare Roble uu caawa la kulmayo Midowga Musharaxiinta